Ogaden News Agency (ONA) – Siyaasadii dhinaca mediaha ee Cabdi iley iyo Abraha oo khashifantay – Noora Afgaab
Siyaasadii dhinaca mediaha ee Cabdi iley iyo Abraha oo khashifantay – Noora Afgaab
General Abraham wolde iyo cabdi illey ayaa waxay ogaadeen in ayna JWXO dagaal waxba kaga qaadi karin. Hadaba 6xdii bilood ee ugu danbeeysay waxay ku mashquulsanaayeen in aay masuulinyiinta JWXO kasoo afduuban wadamada jaarka ah waxayna qorshe u qaateen in ay xooga saaraan wadamada Kenya, Jabouti, Somaali iyo Yemen. Ujeedada ugu waayn ayaa ahayd in aay masuuliyiintaas marka ay soo afduuban ee Ethiopia lakeeno in loo adeegsado borobogaandho khal khal galin karta dadka aan waxba ogaayn gaar ahaan shacabka taageersan JWXO iyo kuwo katirsan ee aan xog ogaalka ahaayn. Hadaba 6xdii bilood ee lasoo dhaafay waxaay labadan nin hawlgaliyeen dad calooshoda u shaqeeystayaal ah oo kabadan 75 qof kuwaas ooy 15 iyo toban kamid ihi dumar yihiin, waxaana kooxdan ku baxday lacag kabadan 12 million oo birr waxaana loo xilsaaray koox walba wadan gooni ah. Sidoo kale waxaa loo balan qaaday kooxdii ku guuleysata in ay soo afduuban cida kamid ah masuuliyinta JWXO lacag ka badan 50 million oo birr in lagaga badasho ninkiiba.
Kooxdan waxaay isugu jiraan dad Soomali ah iyo kuwo wadamadaas u dhashay ooy qaarkood ganacsato yihiin qaarna aay dawlada u shaqeeyaan, waliba laamaha sirdoonka. Hadaba markii dhawantan lasoo afduubay labadii sargaal ee JWXO katirsanaa waxaay qayb ka ahaayd arintaas. Hasa ahaatee markay mediaha caalamku aad ugu hadleen ayaa waxaad moodaa in ujeedadii ay ka lahaayeen afduubkaas dib loo dhigay kadib markii aay masuuliyiinta sare ee Ethiopia maqleen JWXO-na aay kahadashay.
Intaas kadib waxay hadana xooga saareen kooxdii Soomaliya inay wax cusub keenan waxaayna soo qabteen sargaal kale oo la yidhaahdo Muxumed ani waxayna yidhaahdeen ninkaas oy 8sideed nin oo kale wada socdaan ayaa isasoo dhiibay ujeedada aay sidaas uleeyihiin waxaay ahayd in shacabka iyo mediaha caalamka JWXO lagu soo jeediyo oo laga dhigo inay JWXO kala furatay oo nimankaasina ay nimankan kale daba socdaan. Waxaana qorsheysneyd xaflad wayn oo larabay in ay kasoo qabygalaan dhamaanba wixii wakhti uun JWXO taagero u noqday ama lasoo afduubay ama kasoo galay ama lagu eedeyey oy kamid yihiin dadka jeelasha ka buuxa qaarkood oo laga dhigayo ciidan JWXO kasoo xarooday inta hubloo dhibo. Waxaana uu qorshuhu ahaa inay xafladaas qabtaan Cabdi iley iyo general Abraham Isniintii hada ina dhaaftay, waxaayna doonayeen in ay wariyayaasha Ethiopia iyo cidii kalee ay helaan uyeedhan oy yidhaahdaan waakuwa madaxdii JWXO ugu sareysay iyo ciidankoodii waayna isa soo dhiibeen oo nabad ayey qaateen kadibna ragan lasoo afduubayna hadlaan oy sidaas naftooda ku badbaadiyaan taasoy u arkayeen in ay tahay dagaalkii ugu danbeeyey ee dhinaca mediaha ay JWXO ku qaadaan. Waxaa kale oo xafladan kasoo qayb galayey dhamaan shiihalaqeyasha liyuu booliska ee degmooyinka iyo gobolada ku sugan iyo booliska caadiga ah.
Hadaba inkasta oy wali joogaan liyuu booliskii degmooyinka looga yeedhay ee xafladaas beenta ah u yimid hadana waxaa arintaas oo lasugayo Addis ababa isaga kacay Cabdi iley naftiisii oo ku tagay si kadis ah.
Sababaha arintani ayna ilaa hada udhicin waxaa laga yaaba in ay tahay;
1. Ethiopia oo aragtay in aayna tani ka soconeynin islamarkaasna arintii Cabdi iley iyo general Abraham ku koobantay
2. Meesha ay kasii kala dhacday waa markii si lama filaan ah oo ayna Cabdi iley iyo Abraham fileeynin markii loo wareeystay gudoomiyihii Muxumed ani iyo staff kiisii Somaaliya laga soo dhiibay markii uu arintii dooxay shaacana kaqaaday, ayaad mooda in aay soo afjartay borobogaandhadii ay Cabdi iley iyo Abraham damacsanayeen.
3. Qaabka warbaahinta Ethiopia gaar ahaan tan kililku uga hadashay arimahaas biloowgoodii hore oo laysku khilaafsan yahay kadib markii uu Cabdi iley oo islahaa yeeyna libinta cidkale sheeganin uu markiiba cakaranews kusoo tuuray oo yidhi waxaan xuduuda kasoo qabanay Sulub iyo Cali dheere hada uu daqiiqado kadib hadana soo galiyey iyagaa isa soo dhiibay. Arimahaas ayaa loo badinayaa in aay kaliftay in aay nimankaas Ethiopia cod mideysan kasoo saarto.
4. Qaabka nimanka loo soo afduubay oo ahaa qaab fashilan oo lawada ogyahay.
5. Sulub iyo Cali dheere oo geeri kaxiga oon aqbalin in lagu been abuurto oo loo adeegsado borobogaandho ah been oo ah waan isa soo dhiibnay ama nabadbaan qaadanay.
Hadaba inkasta oyna wali xafladaasi dhicin hadana maadama oy wali joogan dadkii xafladaas beenta ah loogu yeedhay lama garan karo in aay kaxishoon doonan in ay qaban doonaan iyo inkale, laakiin waxaan dadka usheegaynaa in aayna dhagaha u raaridin beenta labadaas nin ee wakhtigoodii dhamaaday.